Ungazidlulisela njani izingxoxo zeWhatsApp ukusuka kwi-iPhone iye kwi-Android okanye ngokuchaseneyo | IPhone iindaba
UIgnacio Sala | | Android, Izifundo kunye neencwadana
Zombini i-iOS kunye ne-Android zisinika iindlela ezininzi zokuphepha ukulahleka kwedatha ukuba sikwiqonga elinye. I-backups kwi-iCloud okanye kwiakhawunti yethu kaGoogle isuka kwenye i-Android iye kwenye okanye ukusuka kwi-iPhone enye iye kwenye kukudlala komntwana kwaye asilahleki konke okuqulathwe yi-smartphone yethu yangaphambili ukuze sikwazi ukuqhubeka nale intsha njengoko ukuba bekungekho kwanto eyenzekileyo. Kodwa ¿kwenzeka ntoni xa sifuna ukusuka kwi-iPhone iye kwi-Android okanye ukusuka kwi-Android ukuya kwi-iPhone?
Kule meko izinto zitshintsha kakhulu. Isicelo ekuthethwa ngaso sinokuba neeseva zaso ukugcina idatha kwaye iyahambelana nazo zombini i-Android kunye ne-iOS, njengoko kunjalo ngeTelegram, kwaye olo tshintsho alunakubonwa, kodwa ukuba akunjalo, njenge-WhatsApp, inyani yile kuya kuba nzima ukungaphulukani nazo zonke izingxoxo zethu kunye neefoto xa usiya kwi-iOS uye kwi-Android okanye ngokuchaseneyo. Kodwa kukho iindlela zokuphumeza kwaye apha sikuxelela ezona zichanekileyo kwaye zilula.
Inkqubo yokudlulisa izingxoxo zikaWhatsApp ukusuka kwi-iPhone iye kwi-Android, okanye ngokuchaseneyo, inokuba nzima ngakumbi okanye incinci, kuxhomekeke kwisicelo esisisebenzisayo. Abafana abavela kwi-Tenorshare babeka isicelo sethu se-iCareFone, isicelo sokuba, ukongeza ekusivumeleni dlulisa idatha ye-WhatsApp ukusuka kwelinye iqonga leselula ukuya kwelinyeIkwasivumela ukuba sihambise imifanekiso kwi-iPhone yethu, kwi-iPad okanye kwi-iPod touch kwikhompyuter yethu ukongeza kwi-iTunes, ikopi yomculo, iincwadi kunye nemifanekiso kwisixhobo sethu, cima usetyenziso ... konke ngaphandle kokusebenzisa iTunes nangaliphi na ixesha
Ukugqithisa idatha ye-WhatsApp kwi-iPhone yakho okanye kwifowuni ye-Android, nge-iCareFone yinto elula kakhulu (ebalulekileyo) kunye nenkqubo ekhawulezayo (amanyathelo ekufuneka elandelwe), kuba ixesha lokugqibela liya kuxhomekeka kwinani lemifanekiso kunye neevidiyo esizigcinileyo akhawunti yethu kuWhatsApp ngesixhobo sethu. Inkqubo iyafana ngqo kuzo zombini iinkqubo zokusebenza.
Nje ukuba sisebenzise isicelo iCareFone, kufanele si qhagamshela zombini izixhobo, umthombo kunye nendawo oya kuyo kwikhompyuter yethu nangokhetho lokukhetha oluza kuba ngumthombo wedatha (ukusuka kwesiphi isiphelo esifuna ukukhupha idatha) kunye nesiphelo sendlela (apho sifuna ukukopa khona). Nje ukuba kusekwe, cofa kuTshintshelo (kwimeko yethu, siza kugqithisa izingxoxo ze-WhatsApp ukusuka kwi-iPhone 6s ukuya kwi-Samsung Galaxy).
Nje ukuba sicofe iqhosha lokuGqithisela, usetyenziso luya kuyikhathalela yenza ikopi yayo yonke idatha kwikhompyuter yethu, kubandakanya zonke izinto eziqhotyoshelweyo kwaye iya kudala ifayile yokubuyisela eya kuthi ibuyisele, uxolele ukungafuneki, isixhobo ekujolise kuso.
Njengoko bendiphawulile kwimihlathi engaphambili, kuxhomekeke kulwazi esinalo kwikopi yethu ye-WhatsApp, inkqubo inokuthatha ixesha elingaphezulu okanye elincinci. Ngexesha lenkqubo yonke, Akufuneki sikhuphe naziphi na iiterminal kwikhompyuter ezo ziyinxalenye yenkqubo ukuba asifuni ukuba inkqubo ingenziwa ngokuchanekileyo.
ICareFone iyafumaneka kuzo zombini IiWindows njengeMacOS.
Ukwenza lo msebenzi unzima sinokufumana iindlela ezahlukeneyo kwi-intanethi, uninzi lwazo lunzima kakhulu kwaye alusebenzi, okanye kwiimeko ezilungileyo bazenza ngokungaphelelanga. Kuzo zonke iindlela ozikhethileyo, eyona indinike esona siphumo sisiphumo seWindows kunye neMac «dr. fone »kunye ne-Tenorshare iCareFone onokuzikhuphelela kuyo esi sixhobo kwaye ungazama mahala. Sisicelo esenza okungaphezulu kokudlulisa imiyalezo yakho ukusuka kwi-iOS iye kwi-Android, kodwa kweli nqaku into enomdla kuthi yile, siza kugxila kulolo hlobo.
Nje ukuba isicelo sikhutshelwe kwikhompyuter yethu, siya kuyenza kwaye siqhagamshele ezi zixhobo zimbini ngokusebenzisa iintambo zazo ze-USB kwi-Mac okanye kwi-PC. Kuya kufuneka samkele yonke imiyalezo efuna iimvume ezibonakala kuthi, ngakumbi isixhobo se-Android apho isoftware eyimfuneko iyakufakelwa khona. ukuze yonke into isebenze njengoko kufanelekile. Nje ukuba yonke into ilungile, siya kuqhubeka nokungena kwicandelo elinomdla kuthi: "Ugcino nokubuyiselwa kwakhona".
Kwiwindow elandelayo sikhetha kwicala lasekhohlo ukhetho "Gcina kwaye ubuyisele i-WhatsApp", kunye neenketho ezahlukeneyo esinokuthi sizenze ngokunxulumene nesicelo seMiyalezo ziya kuvela. Kule meko sikhetha eyokuqala: «Dlulisa imiyalezo ye-WhatsApp».
Izixhobo zethu zombini ziya kuthi emva koko zibonakale, umthombo wedatha ngasekhohlo kunye nomamkeli ngasekunene. Le ngcaciso ibalulekile kuba kufuneka siqiniseke ukuba zibekwe kwindawo elungileyo, kuba isixhobo ekunene, nesiza kufumana idatha, siyakulahla lonke ulwazi lwe-WhatsApp ekufuneka silubuyisile. Ukuba iodolo ayichanekanga, cofa kwiqhosha eliphambili «Flip». Nje ukuba siqinisekise ukuba isixhobo soqobo sisekhohlo kwaye indawo ekuya kuyo ingasekunene, sinokucofa kwi «Dlulisa» iqhosha.
Yinkqubo ethatha imizuzu eliqela, ke yiba nomonde, kwaye nokuba ucinga ukuba isicelo sivaliwe, silinde sigqibe. Xa ukugqithisa kugqityiwe, kuya kufuneka siye kwisixhobo esikuso kwaye silandele amanyathelo abonisiweyo. I-WhatsApp izakuvela kuthi ngokungathi siyifakile, kwaye kuya kufuneka siqwalasele inombolo yethu yefowuni kuyo. Kwinqanaba kuya kuba yimfuneko ukubuyisela idatha egcinwe kwimemori yethu yangaphakathi, njengoko i-WhatsApp ngokwayo iza kusixelela, ukuze yonke idatha esiyigqithisileyo kwi-iPhone yethu igqithiselwe kwi-Android entsha.
Ungazithumela njani iividiyo ezinde ezivela ku-WhatsApp kwaye ungazisiki
Yinkqubo elula enamanqaku aphambili apho kufuneka silumke singaphulukani nolwazi, kodwa ngale miyalelo awuyi kuba nangxaki nakancinci ukuyiphumeza. KUNYEIsiphumo kukuba uya kuba nayo yonke imiyalezo yakho ye-WhatsApp kwisiphelo esitsha, nangona kufanele kuqatshelwe ukuba ayigqibekanga, kuba izingxoxo zibonakala zikhohlakele, kwaye izingxoxo ozigcinileyo ziya kuvela phakathi. Kodwa oko kusonjululwa ngemizuzu embalwa yokuhlengahlengisa i-WhatsApp yakho, kwaye into ebalulekileyo, eyimiyalezo, iifoto kunye neevidiyo, ayinakuphatheka.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Ukhuphiswano » Android » Ungazidlulisela njani izingxoxo zeWhatsApp ukusuka kwi-iPhone iye kwi-Android okanye ngokuchaseneyo
Amakhonkco okhuphelo kwiwebhusayithi esemthethweni awasebenzi. Nasiphi na isisombululo? Kudala ndinentloko ndizama ukuhambisa yonke i-WhatsApp ukusuka kwi-iOS ukuya kwi-Android inyanga enye.
Ayisebenzi kuba ifuna ingxelo ehlawulelweyo, ngapha koko ukhetho lokudlula ku-WhatsApp alunakwenziwa, ngaba ikhona enye indlela yokwenza?
UJair Aicardo Usme Soto sitsho
Ayisebenzi, yonke into ilungile de uyidlulisele, apho ikucela ukuba uyithenge, oko kukuthi, uhlobo lovavanyo alwenzi nto kwaphela. Nasiphi na isisombululo?
Phendula kuJair Aicardo Usme Soto
Okubi nangakumbi, uthenga umboniso. Ayinamsebenzi, kubalulekile ukubuyisa incoko….
Ulandela yonke le nkqubo …… ayinamsebenzi, isiphelo silungile…
Kwaye xa igqibile ukufaka kwakhona i-whatsapp ... kubonakala ngathi uza kuyiphumeza ... kodwa hayi.
Uqinisekisa inombolo yakho yefowuni, kwaye ikuxelela ukuba uphinde ufumane ikopi ... Kodwa tsiba ukufumana ikopi yeDrayivu ...
Akunakwenzeka ukuba ufumane ikopi yendawo naphina.
Ucinga ukuba wenze into engalunganga kwaye uqale ngaphezulu ...
Kwaye ufumana i-WhatsApp, emva kofakelo kathathu, ukukuthintela iiyure ezimbalwa kwaye ungakuvumeli ukuba uqinisekise inombolo.
Kwaye awusenayo ikopi okanye u-whatsapp.
Okokugqibela ... akusebenzi emva kweetry ezintlanu. Ekugqibeleni ayibonakali ibuyisela ... ihlazo.
Ingelosi VD sitsho
Inkqubo ayinikezeli ngethuba lokuhamba ukusuka kwi-Android ukuya kwi-iOS, kuphela ukusuka kwi-iOS ukuya kwi-Android, ke isihloko tb bubuxoki.
Phendula kwingelosi VD
Ndayithenga kwiinyanga ezidlulileyo xa iphone yam itshixiwe kwaye xa ndifuna ukuyisebenzisa kwakhona ukuhambisa iifayile, ifuna ukuba ndiyithenge kwakhona ...
ayisebenzi, bayabuza ukuba babhalise ukuze baqhubeke nenkululeko kwaye ekugqibeleni yonke into inyanzelisa ukuthengwa. Bubuxoki
Phendula kwi eq
Enkosi! Mandivume ukuba xa ndifunda iikhomenti zangaphambili bendisoyika kwaye ndicinga ukuba bubuqhetseba, kodwa bekungenjalo, yonke imiyalezo yam, iifoto kunye neevidiyo zikaWhatsApp zazidlulisiwe, zingasasazeki kodwa into endiyifunayo yafezekiswa.
Uyenze njani? yabelana ngeparfavarts yeakhawunti yentlawulo
Cela ukuba uthenge le nkqubo ...
R. Fdez sitsho
Ewe "idemo" ayisebenzi ukudlulisa i-WhatsApp, kwaye le nkqubo iyabiza kuba ndifuna ukwenza ixesha eli-1 kuphela.
Kuya kufuneka bacace kwaye kwasekuqaleni bathi yinkqubo ehlawulelweyo, ixesha, unganiki "idemo". Ngcono ubeke ividiyo kunye nexesha, ungachithi ixesha lam. Ahhh kwaye inkqubo ye-damn yayindigqitha, ayiniki ithuba lokuyivala, kuye kwafuneka ndinyanzele ukuphuma ukuyivala.
Phendula kuR. Fdez
Cacisa kwinqaku lakho ukuba inkqubo ihlawulwe, ke siyakuphepha ukuyifaka.
Inqaku ngokucacileyo lithi "ungazama mahhala" kwaye bekunjalo ngoJanuwari 2018, xa yayipapashwa. Okwangoku andazi. Nangona kunjalo, wamkelekile.
UArturo Hierro sitsho
Ayikhululekile kwaye ayisebenzi kakuhle kwizihlandlo ezininzi.
Phendula kuArturo Hierro
Ayisebenzi, ndithathe iinzame ezi-3 kwaye akukho nto. Ezi zinto ziyakucaphukisa kangangokuba ekugqibeleni ufike kwisigqibo sokuba kuya kufuneka uhlawule. Kodwa ugqibela ngokukhetha esinye isicelo ngaphandle kweGqr yefowuni, kuba uqhathiwe.
UAsun, kwaye ekugqibeleni usiphumelele ngasiphi isicelo? Enkosi.
Ndidinga ukufudusa izingxoxo zewhatsapp zisuka kwi-iPhone X ziye kwi-Samsung Galaxy Qaphela 20. Ndifuna ukwazi ukuba loluphi urhwebo abalwenzayo?
I-Apple isungula inkqubo yokulungisa simahla kwibhetshi ye-iPad Air 3
U-Apple ucebisa abanye babasebenzi ukuba basebenze ekhaya